Ciraaq Oo Soo Riday Drone Iyo Qasaare Ka Dhashay - Wararka Maanta:...
Ciraaq oo soo riday Drone iyo qasaare ka dhashay – Wararka Maanta:…
Ciidamada Ciraaq ayaa ku soo riday diyaarad Drone ahayd galbeedka Ciraaq, halka laba qof oo rayid ahna lagu dilay koonfurta gobolka Dhi Qar, sida ay ku warantay wakaalada Anadolu.
Sarkaal booliis ah ayaa sheegay in diyaaradda Drone-ka ee la soo riday xilli ay dul heehaabeysay taliska guud ee booliiska ee galbeedka magaalada Fallujah ee gobolka Anbar.
Wuxuu sheegay in diyaaradan ay ku rakibnaayeen kaamirooyin, taasi oo ujeedkeedu ahaa basaasnimo, isaga oo shaaca ka qaaday in loo adeegsaday basaasida ciidamada amaanka ee magaalada.
Ilaa hadda majirto cid sheegatay in diyaaradaan ay lahaayeen, balse Kooxda ISIS ayaa wali ka howlgasha gobolka Anbar oo iyadu inta badan dagaal la gasha ciidanka dowlada ciraaq.
Previous articleku dhawaad 30 ruux oo roobab daadad xoogan wata ku dileen India
Bashar al-Assad oo markii afraad loo dhaariyay xilka madaxweynaha…
Wararka Maanta : Gabar Soomaali la la'aa oo meydkeeda laga helay Magalada Minneapolis -...
Wararka Somali34 mins ago